Ungayipaka phi mahala embindini weMoscow? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Kuphi ukubeka ipaki kwiziko laseMoscow?
EMoscow, ngakumbi embindini, kunzima ukufumana indawo yokupaka simahla. Ubukhulu becala yokupaka kuhlawulwa. Ngeempelaveki nangeholide eMoscow, ukupaka kukhululekile ecaleni kwendlela. Ngapha koko, yiCawa kuphela ethathwa njengosuku lokuphumla. Kwiindawo zokupaka ezinjalo kukho imiqondiso echaza ukuba intlawulo ngeeCawa ayithathwa. Ungakhangela kwiiyadi, kodwa abahlali bendawo baya ngokuya befaka izithintelo ekungeneni, ukuze kungabikho mntu unokuma ngokukhangela indawo yokupaka simahla athathe indawo yomnye umntu. Ewe, kwaye, njengenketho, unokufumana isicatshulwa; Kwiimeko ezinjalo, indawo yakho yokupaka iya kuba simahla naphina.
Kunzima, kodwa kunokwenzeka. Ungapakisha mahala kwiziko eliphambili lelizwe lethu kufutshane nezikolo kunye nezibhedlele. Akukho mntu uya kukwazi ukulandelela ukuba ungumqeshi okanye undwendwe kula maziko okanye hayi. Kodwa kufanelekile ukukhumbula ukuba ukuhlala kwindawo yokupaka kula maziko kuhlala isazela sakho siphela.
Ndiyayazi indawo ekufutshane nesakhiwo esiphakamileyo kwi-Kotelnicheskaya embankment kufutshane nokunyuka okuphezulu. Ngokwenene lo ngumda we-boulevard ring.
Ngaphakathi kwindandatho ye-boulevard akukho ndawo unokuyipaka simahla. Inxalenye yokupaka okuhlawulelweyo yabelwe indawo yokupaka simahla kubantu abakhubazekileyo. Ukususela nge-1 kaMeyi, i-2014 uya kuvunyelwa ukuba upakishe iziko mahala kwimpelaveki nangeholide.
Bendidla ngokupaka simahla kwiBoulevard Ring embindini weTrubnaya Square (kukho indawo eyaneleyo apho). Ndicinga ukuba ngoku yokupaka kuhlawulwa.
Akukho ngxaki ekufumaneni ukupaka emva kweGadi yeKhonkco.
Imigaqo yokupaka ehlawulwayo ayisebenzi kwimimandla yenkundla.
Indawo kunye nendawo yokupaka okuhlawulelweyo kufuneka ixhotyiswe ngokufanelekileyo, okuthetha ukuba iimpawu kufuneka zibekho. Ngabo bakhokelwa ngabaqhubi beenqwelo moya ukuba bangene kumda wokupaka ohlawulelweyo. Gcina nje ukhumbula ukuba ngoku indawo yokuhlawulela yokupaka sele ihlawulwe ngaphandle kweGadi Ring, kwaye ngokubeka iimoto phantsi kwentsika engenanto, xa ubuyela ungayifumana le ntelekelelo yeendleko;
Ukupaka nathi kuboniswe luphawu lokuba yi-Qu; I-Рquot ;, kwaye, ukuba ihlawulwe, izangqa zizobe ziphantsi komqondiso obonisa iingqekembe. Ngamanye amaxesha kukho ibhilibhodi enombhalo ocacileyo;; ungenisa umda wokupaka ohlawulelwayo ;. Ukuba akukho nanye okanye enye, awudingi ukuhlawula indawo yokupaka, isimahla. Ngamanye amaxesha kwindawo yokupaka ehlawulelweyo ukumakishwa kuyahambelana, kusetyenziswa oku kuyaothusa ukuba uthandabuza ukuba uhlawule okanye hayi. Oku kukuthi ukuba umqhubi ngequbuliso akabonanga uphawu oluhambelanayo, kodwa wabona ibhodi yolwazi kunye namanqaku.
Ukuba ufumana indawo yokupaka iimoto kwaye akukho zimpawu zibonakalisa ukuba ihlawulwe, kwaye akukho ziphelo zokuhlawula, ke ukupaka kusimahla. Emva kwentsimbi yesi-8 kunye nobusuku bonke, ukupaka iziko likhululekile ...
Indawo yokupaka simahla embindini weMoscow inokufumaneka kufutshane nezibhedlele kunye neetempile. Ungayibona indawo yokupakisha ekhoyo embindini, ongazihlawulanga ngayo, usebenzisa isicelo esikwi-iTunes ParkApp. Ukuba ubhaliso lwenkunzi okanye unepropathi apha, unokufumana imvume yokupaka abahlali kwi-MFC. Oku kuya kukunika ithuba lokupakisha simahla embindini weMoscow kumhlaba weendawo zokupaka ezihlawulelwayo. Kuyinyani, kuya kufuneka uhlawule i-ruble ezingama-3000 ngonyaka. Iiyure zokupaka zasimahla zemvume enjalo ukusuka nge-8 pm kuye kwe-8 kusasa. Kananjalo ngeeCawa kunye nokupakisha iiholide zikawonke-wonke kumbindi weMoscow kuya kuba simahla.
Ngapha koko, indawo yokupaka simahla embindini weMoscow ngoku inokwenzeka kwizadi, kuba kubonelelwe abahlali bendawo okanye abasebenzi bamaziko abekwe apho. Ewe akukho sithuba saneleyo apho, kodwa ngexesha lasemini, umzekelo, xa wonke umntu esiya emsebenzini esiya kusebenza, kunokwenzeka ukuba ufumane indawo kwiintendelezo zesakhiwo sokuhlala. Kwaye emva kokuphela kosuku lokusebenza, ngokuchaseneyo, kwelinye iziko okanye umbutho.
Ungapaka kwiiyadi ezininzi, ezivaliwe zizithintelo, kodwa ngexesha lazo uninzi lwazo lukhululekile. Kukho isisombululo kwingxaki-ulawulo lwendawo ekude lokuvula izithintelo-luvula iipesenti ezingama-80 (zitshekishwe ngokobuqu) Indawo ekuthengiswa kuyo izithintelo.net
exhonyiweyo imoto kunye nomlilo
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,432.